हात्तीपाइलेविरुद्धको औषधि खुवाइँदै – Aarthik Dainik
गृहपृष्ठ ∕ नेपाल ∕ हात्तीपाइलेविरुद्धको औषधि खुवाइँदै
आर्थिक दैनिक २०७८, फागुन २४ ११:४६
काठमाडौं । सरकारले शनिबारदेखि हात्तीपाइले रोगविरुद्धको औषधि खुवाउने भएको छ । हात्तीपाइले रोग निवारणका लागि पाँच जिल्लामा तीन प्रकार र पाँच जिल्लामा दुई प्रकारका औषधि खुवाउन लागेको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य विभागमा सोमबार भएको कार्यक्रममा बोल्दै महाशाखाका प्रमुख डा. चुम्बनलाल दासले १० जिल्लामध्येको पाँच जिल्लामा पहिला चलाएको डाइथाइलकार्बामाजिन एक सय एमजी र चार सय एमजीको अल्बेन्डाजोल औषधिले रोग निवारण नभपछि अर्को थप औषधि दिन लागेको बताए । थप गरिएको आइभरमेक्टिन नामक औषधिले लुतोका साथै जुम्राको समेत काम गर्ने गदर्छ । डा. दासका अनुसार पाँच जिल्लामा भने डाइथाइलकार्बामाजिन एक सय एमजी र चार सय एमजीको अल्बेन्डाजोल औषधि मात्र दिइनेछ ।
महाशाखाका अनुसार मोरङ, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र कैलालीमा तीन प्रकारका औषधि प्रयोग गरिन्छ भने झापा, बारा, लमजुङ, पर्वत र बागलुङमा दुई प्रकारका मात्र औषधि प्रयोग गर्न लागिएको हो । १० जिल्लामा गरी करिब ६२ लाख ६३ हजार मानिसलाई औषधि दिइनेछ भने औषधि सेवन कार्यक्रममा चार हजार सात सय र आठ हजार आठ सय महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविका परिचालन हुनेछन् ।